တစ်ချိန်တုန်းက အမှတ်တရပုံရိပ်လေးကို မျှဝေလာတဲ့လွင်မိုး… – Maythadin
တစ်ချိန်တုန်းက အမှတ်တရပုံရိပ်လေးကို မျှဝေလာတဲ့လွင်မိုး…
May Thadin | November 21, 2020 | Celebrity | No Comments
တစ်ချိန်တုန်းက အနုပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တဲ့ ဒွေး၊လွင်မိုးနဲ့ ထက်ထက်တို့အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေကိုတော့ မချစ်ဖူးခဲ့တဲ့သူရှိမယ် မထင်ပါဘူးနော်။အနုပညာလောကမှာ အတွဲညီညီနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ရသအမျိုးမျိုးပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့တွေကတော့ အချိန်ကာလတစ်ခုကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ထက်ထက်တစ်ယောက်သာ အနုပညာ
လောကထဲ ကျန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ကိုသားကြီးကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာ လူ့လောကကြီးကို အစောဆုံးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့သလို လွင်မိုးကလည်း အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်နားပြီး စီးပွားရေးကိုပဲ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့် တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေမျှဝေပေးလေ့ရှိသလို
ဒီနေ့မှာတော့ ဟိုးတချိန်တုန်းက ပုံရိပ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရစကားတချို့ကိုမျှဝေလာပါတယ်။တစ်ချိန်တုံးက..ကျွန်တော်တို့အနုပညာ..ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ.. ဦးလှထွန်း..ရဲ့ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းကိုသွားကြတာပါ.. နေ့ရက်တွေတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး…ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကစီစဉ်တာပါ.. ဥက္ကဌ..ဦးစိန်တင်လက်ထက်ကပါ..မှတ်မိနေတာတခုက..အားလုံး
မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စားလာရမယ်ဆိုလို့..အားလုံးကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း..ညီညွတ်နေကျတာပါ.. ကိုသားကြီးတယောက်ပဲ..အစောကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်သွားခဲ့တာပါ..ကျန်တဲ့သူတွေကတော့..နည်းမျိုးစုံနဲ့..ရှင်သန်နေကျရဦးမှာပါ…. ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ်။တချိန်တုန်းက ပရိသတ်အချစ်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ ဒွေး၊လွင်မိုးနဲ့ ထက်ထက်တို့ရဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်လေး
ကတော့ ကြည့်မိသူတိုင်းကို အရင်တုန်းကအတိတ်တွေကို လွမ်းဆွတ်စေမိမှာ အမှန်ပါ။ အတွဲညီညီနဲ့ ပရိသတ်အချစ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူတို့တွေထဲက ဒွေးကတော့ အစောကြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ပေမယ့် ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ လွင်မိုးပြောခဲ့သလိုပဲ လောကဇာတ်ခုံမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျင်လည်နေရဦးမှာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ..ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တဈခြိနျတုနျးက အနုပညာလောကမှာ ဒိတျဒိတျကွဲအောငျမွငျမှုတှသေိမျးပိုကျထားခဲ့တဲ့ ဒှေး၊လှငျမိုးနဲ့ ထကျထကျတို့အနုပညာရှငျမောငျနှမတှကေိုတော့ မခဈြဖူးခဲ့တဲ့သူရှိမယျ မထငျပါဘူးနျော။အနုပညာလောကမှာ အတှဲညီညီနဲ့ ပရိသတျတှကေို ရသအမြိုးမြိုးပေးစှမျးနိုငျခဲ့ကွတဲ့ သူတို့တှကေတော့ အခြိနျကာလတဈခုကွာမွငျ့ပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ထကျထကျတဈယောကျသာ အနုပညာ
လောကထဲ ကနျြခဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ကိုသားကွီးကတော့ အောငျမွငျနတေဲ့အခြိနျမှာ လူ့လောကကွီးကို အစောဆုံးနှုတျဆကျထှကျခှာခဲ့သလို လှငျမိုးကလညျး အနုပညာလှုပျရှားမှုတှရေပျနားပွီး စီးပှားရေးကိုပဲ ဇောကျခလြုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အားပေးနတေဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ လူမှုကှနျရကျကနတေဆငျ့ တနတေ့ာအကွောငျးအရာလေးတှမြှေဝပေေးလရှေိ့သလို
ဒီနမှေ့ာတော့ ဟိုးတခြိနျတုနျးက ပုံရိပျလေးနဲ့ပတျသကျပွီး အမှတျတရစကားတခြို့ကိုမြှဝလောပါတယျ။တဈခြိနျတုံးက..ကြှနျတျောတို့အနုပညာ..ညီအဈကိုမောငျနှမတှေ.. ဦးလှထှနျး..ရဲ့ကငျဆာဖောငျဒေးရှငျးကိုသှားကွတာပါ.. နရေ့ကျတှတေော့မမှတျမိတော့ပါဘူး…ရုပျရှငျအစညျးအရုံးကစီစဉျတာပါ.. ဥက်ကဌ..ဦးစိနျတငျလကျထကျကပါ..မှတျမိနတောတခုက..အားလုံး
မွနျမာဆနျဆနျဝတျစားလာရမယျဆိုလို့..အားလုံးကပုံမှာမွငျရတဲ့အတိုငျး..ညီညှတျနကေတြာပါ.. ကိုသားကွီးတယောကျပဲ..အစောကွီးကြှနျတျောတို့နဲ့လမျးခှဲနှုတျဆကျသှားခဲ့တာပါ..ကနျြတဲ့သူတှကေတော့..နညျးမြိုးစုံနဲ့..ရှငျသနျနကေရြဦးမှာပါ…. ဆိုပွီး ရေးသားမြှဝလောပါတယျ။တခြိနျတုနျးက ပရိသတျအခဈြကိုသိမျးပိုကျခဲ့တဲ့ ဒှေး၊လှငျမိုးနဲ့ ထကျထကျတို့ရဲ့ အမှတျတရပုံရိပျလေး။
ကတော့ ကွညျ့မိသူတိုငျးကို အရငျတုနျးကအတိတျတှကေို လှမျးဆှတျစမေိမှာ အမှနျပါ။ အတှဲညီညီနဲ့ ပရိသတျအခဈြသိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ သူတို့တှထေဲက ဒှေးကတော့ အစောကွီးနှုတျဆကျထှကျခှာခဲ့ပမေယျ့ ကနျြတဲ့သူတှကေတော့ လှငျမိုးပွောခဲ့သလိုပဲ လောကဇာတျခုံမှာ နညျးမြိုးစုံနဲ့ ကငျြလညျနရေဦးမှာ အမှနျပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ..ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးကြေးဇူးတငျပါတယျ။
မြင့်မြတ်၊ယုန်လေး၊ခင်လှိုင်၊ထူးအယ်လင်းတို့အဖွဲ့ အထူးပေါက်ကွဲ ပွဲကြမ်းနေပြီ
ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ ပြည်သူတွေကို နေ့စဉ်နားဒုက္ခပေးနေ​သော ဘနားနားကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ဒိန်းဒေါင်
မနက်ဖြန်ဆေးစစ်ပြီးလို့ ပိုးမရှိးတော့ဘူးဆိုရင် အရင်ကလို ပရဟိတနဲ့ လောကကြီးအတွက် အကျိုးရှိမယ့်အလုပ်တွေကို ပုံမှန်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဦးကျော်သူ..